धेरै शताब्दीयौंदेखि, मान्छे उच्च गुणस्तरीय मासु खोजे र कारण जनावर र तयारी पनि जाडो लागि खाना को एक ठूलो आपूर्ति चराई गर्न गाई को उत्पादनहरु उत्पन्न गरेको छ। तर, धन्यवाद प्राविधिक प्रगति गर्न त्यहाँ विभिन्न additives फीड जनावर भिटामिन र microelements सबै आवश्यक पशु स्वास्थ्य अनुमतिको छन्। तसर्थ, एक औद्योगिक मात्रा मा KRG प्रकार जो प्रत्येक cattleman, भोजन additives को प्रकारको प्रयोग गर्न राम्रो छ के को प्रश्न रुचि राख्नुहुन्छ।
विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाहरू पशुपालन को क्षेत्र मा अनुसन्धान को एक धेरै खर्च र पोषक को आवश्यक रकम समावेश गाई विभिन्न जातिहरु लागि सही रुचाउने शासन र रासन विकास गरे। एक उच्च गुणस्तरीय मासु प्राप्त र एक दैनिक आधार सबै भिटामिन र खमीर प्राप्त गर्नुपर्छ मा जनावर दूध गर्न।
गाई के भिटामिन आवश्यक छ?
गाई को दैनिक आहार सन्तुलित र पूर्ण हुनुपर्छ। तसर्थ, खेत जनावर लागि additives फीड प्रयोग गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यी फँसाना चाहे निम्न भिटामिन र पदार्थ समावेश छ:
क्याल्सियम, फस्फोरस र भिटामिन डी: यी पदार्थ बिना जनावर धेरै लजालु हुन्छन् र तिनीहरूले दाँत, वजन र मासु को गुणस्तर मा एक महत्वपूर्ण कमी गर्न जान्छ जो आफ्नो भोक, गुमाउन।
साल्ट। जनावर यसको कमी मा akobaltoz देखा पर्न सक्छन् र गाई कम दूध दिने र वजन गर्न थाल्छन्।
आहार पूरक पनि तामा हुनु पर्छ। यो बेला अपर्याप्त स्वस्थ रंग कोट प्रजनन क्षमता र पक्षाघात पनि हुन सक्छ घट्दै, हराएको छ।
मैंगनीज, कोबाल्ट र भिटामिन ए को पशु खाना हरेक दिन प्राप्त गर्दैन भने यी पदार्थ, यो पाचन प्रणाली को इनकार परिणाम र थकान सक्छ।
जस्ता र आयोडिन। को कमी संग यी तत्व धेरै कडा झर्ने पैदावार, साथै पशुहरू कम गर्भवती संभावना छ।
भिटामिन ई एक गाई अक्सर रक्तक्षीणताले पीडित हुन्छन् र त्यहाँ एक धेरै मजबूत वजन छ बिना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भिटामिन, को।
को आधुनिक उत्पादन आफ्नो संरचना मा सुनिश्चित गर्न अभिप्रेरित additives फीड गाई हरेक दिन प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर सबै आवश्यक पोषक थियो।
सही आहार बारेमा केहि शब्द
आजकल, यो फरक additives प्रयोग बिना KRG लागि सही आहार बनाउन असम्भव छ। को न्यानो महिना मा, जनावर जहाँ तिनीहरूले हिउँदमा पोषक को घाँस प्रशस्त प्राप्त, तर के, को Meadows मा खुरचना गर्न सक्छन्, जब शारीरिक अनुपस्थित चराई को संभावना? यस मामला मा, विशेष फीड र additives फीड को समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ। तिनीहरूलाई पशुहरूको प्रदान गर्न बिना उचित आहार कठिन र महंगी हुनेछ।
तसर्थ, KRG को खेती र प्रजनन मा लगी भएको छ जसले हरेक व्यक्ति राम्ररी पशुहरू खान के निगरानी गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, एक वर्षको लागि प्रत्येक गाई बारेमा 26 किलोग्राम मात्र एक नुन प्राप्त गर्नु पर्छ। कुनै कम महत्त्वपूर्ण यसको संरचना मा पशु प्रोटीन धेरै समान छ र मांसपेशी तन्तु को विकास को लागि आवश्यक छ जो प्रोटिन छ। प्रोटिन को मा निहित फिड खमीर, त्यसैले तिनीहरू जनावरहरूको दैनिक आहार समावेश हुनुपर्छ।
पशु मा additives गाई मा पाचन गर्न लाभदायी खुवाउन र सबै आवश्यक भिटामिन र पदार्थ प्रदान गर्नुहोस्। तर, यो पनि धेरै महत्वपूर्ण र फिड र additives फीड को सुरक्षा, त्यसैले मूल्य Chase छैन र सस्तो फिड किन्न, तिनीहरूले मात्र लाभ, कति हानि ल्याउन सक्छ किनभने छ।
यी दिन, एकदम मा additives को केही विभिन्न प्रकारका छन् पशु फिड। आफ्नो चयन मा उमेर र गाई को प्रत्यक्ष वजन द्वारा निर्देशित हुनुपर्छ। भिटामिन परिसर तेल र केंद्रित को रूप मा छन्। तर, एकपटक यो लायक छ सही कडाई आफ्नो जनावर प्रति भोजन फीड सबै additives थप्न र दिन निषेध गरिएको छ कि टिप्पण।
पशु पहिले आहार को परिवर्तन को लागि तयार गर्न आवश्यक छैन, त्यसैले थपिएको तुरुन्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ खुवाउन गर्नुभयो। तयार एकीकृत मिश्रित फिड पहिले नै pastoralists आफ्नै सही आहार छनोट गर्न लागि आवश्यकता समाप्त जो आफ्नो संरचना सबै आवश्यक भिटामिन र खनिज, मा समावेश छन्। तसर्थ, हाम्रो दिनमा अब जाडो मा गाई लागि खाना को खरीद सामना गर्न छ, तर तपाईं केवल तयार बनाएको खाना खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, additives को एक किसिम पशु को एक विशिष्ट नस्ल लागि डिजाइन गर्दै छन् सजग हुनुहोस्। आफ्नो गाई लागि सही पूरक चयन गर्ने बारे थप छलफल गरिनेछ।
प्रजनन साँढेको लागि additives
यदि प्रजनन साँढेको को आहार आवश्यक एमिनो एसिड र पोषक समावेश गर्दैन, त्यसपछि गाई impregnate आफ्नो क्षमता धेरै बुरा छ, र यो कम्तिमा दुई महिना हुनेछ पुनर्स्थापना। साथै, चढाएको म्याग्नेसियम को अतिरिक्त र प्रोटिन मोटोपना बुल गर्न सक्छ। यसलाई त्यसैले मस्यौदा व्यवसायीक मा लगे गर्नुपर्छ जो जनावर, उचित पोषण प्रदान गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
यसलाई रुचाउने प्रक्रिया हिंसापुर्वक छैन उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने टिप्पण लायक छ। जनावर खाना खाने सबै आवश्यक पदार्थ प्राप्त गर्नु पर्छ, के जनावर लागि additives फीड को सहायता गर्न आउँछ।
गर्भवती गाई र heifers लागि पूरक
पूर्व गाई को आहार गर्न additives शुरू गर्न धेरै हप्ता एक उच्च क्याल्सियम आहार, चिनी, पशु बोसो, म्याग्नेसियम, र अझै पनि अन्य macrocells को एक विशाल सूची प्राप्त गर्नुपर्छ। यी पोषक सबै गाई Meadow घाँस प्रदान गर्न सक्छन्, तर आधारभूत आहार पशु silage वा पराल हुन्छन् गर्दा, यो हिउँदमा गर्न?
यस मामला मा, फिड थपिएको, जो एक किफायती मूल्य मा विशेषता स्टोर को एक किसिम मा खरिद गर्न सकिन्छ सन्तुलनमा मदत गर्नेछ राम्रो पोषण को समस्या समाधान।
आधुनिक additives को उत्पादन
विभिन्न फिड र bentonite थिए पशुधन लागि पहिलो फिड पूरक, को सोभियत संघ मा देखियो। एकदम, पैदावार वृद्धि गर्न प्रत्यक्ष वजन को संग्रह बढाउने र प्रजनन क्षमता सुधार गर्न अनुमति जनावर को दैनिक आहार मा आफ्नो प्रवेश। यी additives अनाज संग एक पटक एक दिन गाई दिइएको हो। तर, वास्तवमा बावजुद यस्तो रुचाउने कि विशेष आर्थिक लागत आवश्यकता छैन, तर, यो नैतिक र प्रौद्योगिकी अप्रचलित छ। आधुनिक खाना थपिएको उत्पादन र सबै आवश्यक भिटामिन, खनिज, चारा खमीर को अधिकतम अनुपात विषय, precipitate र विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया को पाठ्यक्रम मा प्राप्त उत्पादनहरु को अन्य डेरिवेटिव। यस्तो additives धेरै बहुमुखी र गाई विभिन्न जातिहरु खुवाउने लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
फिड थपिएको मात्र छैन दूध उपज र मासु गुणस्तर को मात्रा बढ्छ, तर पनि पाचन प्रणाली को कामकाज मा एक लाभदायक प्रभाव छ र राम्रो स्वास्थ्य मा जनावर दिन्छ। तसर्थ, आधुनिक जटिल additives गाई को आहार को अभिन्न भाग हो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, फिड मा सुरक्षित गर्न आवश्यक छैन यसको गुणस्तर जनावर को सामान्य अवस्था निर्भर कारणले।
वसन्त जौ: प्रजातिहरू, रोपण मिति, खेती, आर्थिक मूल्य
सर्वश्रेष्ठ Oviparous नस्ल कुखुरा: वर्णन, सुविधा र समीक्षा
Seeder अन्न र tilled
आलु harvesters। कृषि मशीनरी
साधारण रोगहरूबाट र broilers आफ्नो उपचार
Desiccant dryers - विमान प्रणाली जोगाउन सबै भन्दा राम्रो तरिका
कसले भन्यो ... र मूल्य बयान "कुनै समस्या - - कुनै मानिस छ त्यहाँ एउटा समस्या छ, त्यहाँ मानिसहरू हुन्"
जोरजियन तह केक achma र "अल्छी" विकल्प - achma Lavash
टन, "बचत बैंक" बैंक कार्ड सँग आफ्नो खाता अद्यावधिक गर्ने?
कसरी इन्जिन तेल भर्न? सुझाव र चाल
बेलायत सरकार गठन। रानी र संसद
Lubcha महल: इतिहास, त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्न। ताले बेलारुस
यो मनोरञ्जन केन्द्र "Boyar Manor" Ulyanovsk: तागत र कमजोरीहरूलाई
1 बच्चाको लागि मर्मतका: कति प्रतिशत छन्
छत gable छत को फ्रेम को स्थापना: डिजाइन, सामाग्री र उपकरण
चिनियाँ सुलेखन - पुरातन पूर्व को शास्त्रीय कला कला